Mutsvakurudzi Wezvemagariro Evanhu, muRoma, uye muMuslim | Bhaibheri Rinochinja Upenyu
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Batak (Toba) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Malagasy Malay Myanmar Norwegian Nzema Oromo Ossetian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
MUMWE musikana akanga asingafariri zvaMwari uye aiva nebasa repamusoro akazoziva sei chinangwa choupenyu? Mumwe murume aipinda chechi yeRoma akadzidzei nezverufu chakaita kuti achinje mararamiro aaiita? Uye mumwe murume wechidiki akanga akaora mwoyo akadzidzei nezvaMwari zvakazoita kuti ave muKristu? Verenga zvinotaurwa nevanhu ava.
“Kwemakore Ndaizvibvunza Kuti, ‘Tinomboraramirei?’”—ROSALIND JOHN
GORE ROKUBEREKWA: 1963
NHOROONDO YOUPENYU: AIVA NEBASA REPAMUSORO-SORO
Ndakaberekerwa kuCroydon, nzvimbo iri kumaodzanyemba kweLondon. Ndiri mwana wechitanhatu mumhuri ine vana vapfumbamwe. Kumusha kwevabereki vangu kwaiva kuchitsuwa chinonzi St. Vincent chokuCaribbean. Amai vaipinda chechi yeMethodist. Ndakanga ndisina hanya nokuziva nezvaMwari, kunyange hazvo ndaida kudzidza chaizvo. Kazhinji pandaiva pazororo rechikoro ndaienda kudziva raiva pedyo nekwataigara, ndichinoverenga mabhuku akasiyana-siyana andainge ndawana kuraibhurari.
Pashure pemakore akati ndapedza chikoro, ndakasarudza kuita zvokubatsira vaitambura. Ndakatanga kubatsira vaiva vasina pokugara uye vaiva vakaremara nevane pfungwa dzinononoka kubata zvinhu. Zvadaro ndakatanga kuita dhigirii rezvoutano. Ndapedza zvidzidzo zvangu, ndaiwana mabasa epamusoro-soro uye upenyu hwangu hwakava hwomutambarakede. Basa rangu raiva rokupa mazano makambani uye kutsvakurudza nezvemagariro evanhu, saka zvaingoda kuti ndive nekombiyuta inotakurika uye ndikwanise kuvhura Indaneti chete. Ndaienda kunze kwenyika nendege kwemavhiki akati oo, ndonogara muhotera yandaida, ndichiyevedzwa nenzvimbo yacho uye ndaishandisa midziyo yepo kuekisesaiza. Ndaifunga kuti uku ndiko kunonzi kurarama. Asi ndakaramba ndichingofunga nezvekubatsira vanotambura.
Kwemakore ndaizvibvunza kuti, ‘Tinomboraramirei?’ Asi handina kumboedza kutsvaka mhinduro yacho muBhaibheri. Mumwe musi muna 1999, munun’una wangu Margaret, uyo akanga ava Chapupu chaJehovha, akandishanyira aine imwe shamwari yake yaiva Chapupu, iyo yakandifarira chaizvo. Ndakazongoona ndabvuma kudzidza Bhaibheri neshamwari yemunun’una wangu, asi handina kukurumidza kufambira mberi nokuti basa rangu nemararamiro angu zvaindidyira nguva yakawanda.
Muchirimo chegore ra2002, ndakatamira kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweEngland. Ndiri ikoko, ndakatanga kuwedzera zvimwe zvidzidzo padhigirii rangu rezvemagariro evanhu, ndiine chinangwa chozokuwana repamusoro-soro racho. Ndakatanga kuenda kuImba yoUmambo kakawanda nomwanakomana wangu. Kunyange zvazvo ndaiva ndakadzidza zvikuru, kudzidza kwandaiita Bhaibheri kwaiita kuti ndinzwisise matambudziko oupenyu uye kuagadzirisa. Ndakazoona kuti mashoko aMateu 6:24 ndeechokwadi anoti haugoni kushumira vanatenzi vaviri. Ndaifanira kusarudza kuti ndoshumira Mwari here kana kuti ndomhanyisana nepfuma.
Gore rakapfuura racho, apo neapo ndakanga ndambopinda chidzidzo cheBhaibheri chaiitirwa pamba, Zvapupu pazvaidzidza bhuku rinonzi Is There a Creator Who Cares About You? * Ndakagutsikana kuti Musiki wedu Jehovha ndiye chete anogona kugadzirisa matambudziko evanhu. Asi iye zvino kuyunivhesiti ndakanga ndava kudzidziswa kuti chinangwa choupenyu hachibvi pakutenda kuti kune Musiki. Ndakashatirwa zvikuru. Kwapera mwedzi miviri, ndakarega kosi yangu yokuyunivhesiti ndikasarudza kushandisa nguva yangu yakawanda kuti ndiite zvokunamata.
Mashoko ari pana Zvirevo 3:5, 6 ndiwo akandikurudzira kuchinja mararamiro angu. Anoti: “Vimba naJehovha nomwoyo wako wose, urege kuvimba nokunzwisisa kwako. Funga nezvake munzira dzako dzose, uye iye acharuramisa makwara ako.” Kudzidza nezvaMwari ane rudo kwakandigutsa kupfuura pfuma yose uye chinzvimbo zvandaigona kuva nazvo. Pandakaramba ndichidzidza nezvechakasikirwa nyika ino naJehovha uye zvakaitwa naJesu paakatifira, ndainzwa ndichida kuzvipira kuMusiki wedu. Ndakazobhabhatidzwa muna April 2003. Zvadaro zvishoma nezvishoma ndakaita kuti upenyu hwangu husava netwakawanda-wanda.
Handina chandingaenzanisa noushamwari hwangu naJehovha. Kumuziva kwakaita kuti ndive nomufaro chaiwo mumwoyo. Ndinofara chaizvo kuwadzanawo nevamwe vanamati vechokwadi vaMwari.
Nyota yangu yechokwadi iri kuramba ichipedzwa nezvandinodzidza muBhaibheri uye kumisangano yechiKristu. Ndinonakidzwa nokuudzawo vamwe zvandinotenda. Ndiro ratova basa rangu, iro rinogona kunyatsobatsira vanhu kuva noupenyu huri nani iye zvino uye kuva netariro yeramangwana rakanaka munyika itsva. Kubva muna June 2008, ndiri mushumiri wenguva yakazara, uye ndava kufara nokugutsikana zvandakanga ndisati ndamboita. Ndinotenda Jehovha nomwoyo wose kuti ndava kuziva chinangwa chaicho choupenyu.
“Kufa Kweshamwari Yangu Kwakandirwadza.”—ROMAN IRNESBERGER
GORE ROKUBEREKWA: 1973
NHOROONDO YOUPENYU: KUBHEJA
Ndakakurira muguta duku reBraunau kuAustria. Guta iri raiva nevanhu vakapfuma uye makanga musinganyanyi kuparwa mhosva. Ndakakura ndichipinda chechi yeRoma yaipindwa nevanhu vomumhuri mangu.
Zvisinei pane zvakaitika ndichiri muduku zvakandirwadza zvikuru. Ndinoyeuka rimwe zuva muna 1984 ndiine makore anenge 11, ndichitamba bhora neimwe shamwari yangu. Masikati emusi iwoyo yakafira mutsaona yemotokari. Kufa kweshamwari yangu kwakandirwadza zvisingaiti. Kwemakore akawanda mushure metsaona iyi, ndaingonetseka kuti chii chinoitika patinofa.
Ndapedza chikoro, ndaiita basa rokugadzira magetsi. Kunyange zvazvo ndaigara ndichiita mitambo yokubheja ndichiburitsa mari yakawanda chaizvo, ndakanga ndisina dambudziko remari. Ndaipedzawo nguva yakawanda chaizvo ndichiita zvemitambo uye ndakatanga kufarira nziyo dzemusambo weheavy metal newepunk rock. Ndaigara ndiri kumadhindindi nemapati. Ndairaramira mafaro, ndichiita unzenza, asi ndaisava nechinangwa muupenyu.
Muna 1995, vamwe sekuru vaiva Chapupu vakagogodza pasuo rangu vakandipa bhuku raiva nemhinduro yeBhaibheri yomubvunzo wokuti, Chii chinoitika patinofa? Ndakanga ndichiri kunetseka nezvorufu rweshamwari yangu, saka ndakaritora. Handina kungoverenga chitsauko chaitaura nezvorufu chete, asi bhuku racho rose!
Zvandakaverenga zvakapindura mibvunzo yangu nezvorufu. Asi panewo zvimwe zvakawanda zvandakadzidza. Sezvo ndakarererwa muchechi yeRoma, ndaingotenda muna Jesu chete. Asi pandakanyatsodzidza Bhaibheri zvakandibatsira kuva shamwari yaJehovha Mwari, Baba vaJesu. Ndakafara chaizvo kuziva kuti Jehovha munhu ane ushamwari uye anoita kuti vaya vanomutsvaka vamuzive. (Mateu 7:7-11) Ndakadzidza kuti Jehovha anomborwadziwa uye anombofarawo. Ndakadzidzawo kuti anoita zvose zvaanenge avimbisa. Izvozvo zvakaita kuti ndifarire uprofita hweBhaibheri uye ndiongorore kuti hwakazadziswa sei. Zvose izvi zvakasimbisa kutenda kwangu muna Mwari.
Pasina nguva ndakaona kuti Zvapupu zvaJehovha ndizvo chete zvinonyatsoda kubatsira vanhu kunzwisisa Bhaibheri. Ndaivhura mavhesi aiva mumabhuku eZvapupu muBhaibheri rangu rechechi yeRoma. Pandairamba ndichiongorora ndipo pandakaziva kuti ndakanga ndawana chokwadi.
Kudzidza Bhaibheri kwakaita kuti ndione kuti Jehovha aida kuti nditeerere mitemo yake. Kubva pane zvandakaverenga pana VaEfeso 4:22-24, ndakaona kuti ndaifanira kubvisa “unhu hwekare,” hwakanga hwakonzerwa “nowaimbova mufambiro” wangu, uye kuti ndaifanira “kupfeka unhu hutsva hwakasikwa maererano nezvinodiwa naMwari.” Saka ndakasiya upenyu hwounzenza. Ndakaonawo kuti ndaifanira kurega kuita zvokubheja, sezvo zvaikurudzira kunyanya kuda zvinhu uye makaro. (1 VaKorinde 6:9, 10) Ndaiziva kuti kana ndichida kuchinja saizvozvo, ndaifanira kusiyana neshamwari dzangu ndotsvaka itsva dzaiva netsika dzakafanana nedzangu.
Kuchinja kwacho kwaisava nyore. Kunyange zvakadaro, ndakatanga kupinda misangano neZvapupu paImba yoUmambo uye kushamwaridzana nevemuungano yandaipinda. Ndakarambawo ndichinyatsodzidza Bhaibheri ndoga. Izvozvo zvakaita kuti ndichinje mimhanzi yandaifarira, ndichinje zvinangwa zvangu muupenyu, uye ndigadzirise chitarisiko changu. Muna 1995, ndakabhabhatidzwa ndikava mumwe weZvapupu zvaJehovha.
Iye zvino handichanyanyi kukoshesa mari nezvinhu. Ndaiva nehasha dzisingaiti, asi iye zvino ndava munhu munyoro. Handichanyanyiwo kuzvidya mwoyo nezveramangwana.
Ndinofara chaizvo kuti ndiri mumwe weboka riri munyika yose riri kushumira Jehovha. Vamwe vavo vane matambudziko asi vanoshumira Mwari vakatendeka. Ndinofara chaizvo kuti iye zvino ndava kushandisa simba rangu rose nenguva yangu kuti ndinamate Jehovha uye ndiitire vamwe vanhu zvakanaka, kwete kuti ndiedze kugutsa zvido zvangu.
“Upenyu hwangu hwava nechinangwa.”—IAN KING
NHOROONDO YOUPENYU: AKANGA AKAORA MWOYO
Ndakaberekerwa kuEngland asi pandakanga ndava nemakore anenge manomwe, takatamira kuAustralia. Takatanga kugara kuGold Coast, nzvimbo inosvikira vashanyi muQueensland, kuAustralia. Kunyange zvazvo takanga tisiri vapfumi, taiwana zvataida.
Pasinei nokuti ndakakura ndichiwana zvandaida, ndaisanyatsofara. Ndakaodzwa mwoyo zvikuru nezvaiitika muupenyu. Baba vangu vaiva chidhakwa chemakoko. Ndakanga ndisinganyanyi kuvafarira nemhaka yekunwa kwavaiita uye mabatiro avaiita amai vangu. Ndakatozoziva pave paya kuti vaimbova musoja kuMalaya, uye zvakaita kuti nditange kunzwisisa zvaiita kuti vave neunhu hwavaiva nahwo.
Ndakatanga kuraradza ndichiri kuchikoro chesekondari. Ndava nemakore 16, ndakasiya chikoro ndokunobatana nemauto anoshandira mumvura. Ndakatanga kushandisa madhiragi uye ndakapindwa muropa nefodya. Ndakanga ndisisakwanisiwo kurarama ndisinganwi doro. Ndaisimboraradza pakupera kwevhiki asi ndakanga ndava kuraradza mazuva ose.
Ndava kuda kusvitsa makore 20 ndakatanga kusava nechokwadi kana Mwari ariko. Ndaizvibvunza kuti, ‘Kana Mwari ariko zvechokwadi, nei achirega vanhu vachitambura uye vachifa?’ Ndakatonyora nhetembo ndichipomera Mwari kuti ndiye anokonzera uipi hwose huri munyika.
Ndakasiya chiuto ndava nemakore 23. Ndakashanda mabasa akasiyana-siyana uye ndakatomboshanya mhiri kwemakungwa kwegore, asi hapana chaimbondifadza. Ndakanga ndisingadi kuva nezvinangwa kana kuita chimwe chinhu. Hapana kana chandainyatsofarira. Ndakanga ndisina kana shungu nokuvawo nemba yangu, basa rakanaka uye kukwidziridzwa pabasa. Kunwa doro nekuteerera mimhanzi ndizvo chete zvaindinyaradza.
Ndinoyeuka panguva yandakanyatsonzwa kuti upenyu hwangu hunofanira kuva nechinangwa. Ndaiva kuPoland, ndichishanyira musasa wevasungwa wakakurumbira wekuAuschwitz. Ndakanga ndaverenga nezveutsinye hwakaoma hwaiitwa ikoko. Asi pandakazonyatsoona musasa wacho nemakuriro awakanga wakaita, zvakandibata-bata. Zvakandiomera kunzwisisa kuti vanhu vaigoitira sei vamwe vanhu utsinye hwakadaro. Ndinoyeuka ndichitenderera musasa wacho ndichisvimha misodzi, ndichibvunza kuti ‘Nei?’
Ndadzoka kubva mhiri kwemakungwa muna 1993, ndakatanga kuverenga Bhaibheri ndichitsvaga mhinduro. Pasina nguva yakareba, Zvapupu zvaJehovha zviviri zvakagogodza pasuo rangu ndokundikoka kugungano raiitirwa munhandare yaiva pedyo. Ndakasarudza kuenda.
Ndakanga ndamboenda kunhandare yacho mwedzi mishoma yakanga yapfuura ndichinoona mutambo, asi zvaiitika pagungano iri zvakanga zvakatosiyana zvachose. Zvapupu zvacho zvaiva neunhu hwakanaka, zvakapfeka zvakanaka uye vana vacho vakanga vakadzikama. Ndakashamiswa chaizvo nezvandakaona panguva yekuzorora kwemasikati. Zvapupu zvinosvika mazana zvaidya zviri munhandare, asi pazvakadzokera kunogara, handina kuona kana karara zvako! Ndakanyanya kufadzwa nokuti vanhu vacho vairatidza kugutsikana uye vaiva nerugare, zvinova ndizvo zvandaida chaizvo. Handina kana hurukuro yandinoyeuka yakapiwa musi iwoyo, asi unhu hweZvapupu zvacho ndihwo hwakandibaya mwoyo.
Manheru iwayo ndakafunga nezvemuzukuru wangu aigara achiverenga Bhaibheri uye aidzidza nezvezvitendero zvakasiyana-siyana. Makore akanga apfuura akanga ambondiudza kuti Jesu akati chitendero chechokwadi chinoonekwa nezvachinoita. (Mateu 7:15-20) Ndakafunga kuti ndaifanira kuongorora chinoita kuti Zvapupu zvisiyane nevamwe. Ndakanzwa ndiine tariro kekutanga muupenyu hwangu.
Vhiki rakatevera racho, Zvapupu zviviri zviya zvakanga zvandikoka kugungano zvakandishanyira zvakare. Vakati vaida kudzidza Bhaibheri neni, ndikabvuma. Ndakatangawo kupinda misangano yechiKristu navo.
Pandaidzidza Bhaibheri, maonero andaiita Mwari akanyatsochinja. Ndakadzidza kuti Mwari haasi iye anokonzera zvakaipa nekutambura uye kuti anorwadziwa, vanhu pavanoita zvakaipa. (Genesisi 6:6; Pisarema 78:40, 41) Ndakabva ndatsidza kuti handitombodi kurwadzisa Jehovha. Ndaida kufadza mwoyo wake. (Zvirevo 27:11) Ndakarega kuraradza nekushandisa fodya uyewo zvounzenza. Ndakabhabhatidzwa semumwe weZvapupu zvaJehovha muna March 1994.
Ndava kunyatsofara uye kugutsikana. Handichaedzi kupedza matambudziko angu nokunwa doro. Asi, ndakadzidza kukanda mitoro yangu kuna Jehovha.—Pisarema 55:22.
Ndava nemakore gumi ndaroorana neimwe tsvarakadenga iri Chapupu inonzi Karen, uye ndine mwanasikana wokurera akanaka anonzi Nella. Tose tiri vatatu tinonakidzwa chaizvo nokushandisa nguva yedu yakawanda muushumiri hwechiKristu, tichibatsira vamwe kuti vadzidze chokwadi nezvaMwari. Upenyu hwangu hwava nechinangwa.
^ ndima 11 Rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
Bhaibheri Rinochinja Upenyu​—⁠November 2012